Codsi ku socda dhammaan booqdayaasha bandhigyada ay kafaala qaadayso ururka | Ota Ward Dhiirrigalinta Dhaqanka
Ku saabsan ururka>
Ku saabsan xakamaynta faafitaanka cudurka cusub ee coronavirus>
XNUMX. XNUMX.Tallaabooyinka xakamaynta cudurka aasaasiga ah
Waxaan ka codsaneynaa dhamaan qabanqaabiyaasha iyo booqdayaasha kaqeyb gala xarumaha iyo bandhigyada inay lashaqeeyaan talaabooyinka aasaasiga ah ee kahortaga cudurka.
Sida caadiga ah, xiro maaskaro marwalba.
Si fiican jeermis ugu nadiifi oo gacmahaaga dhaq.
Isku day inaad cabudhisid wada hadalka (ha qaylin) iyo anshaxa qufaca.
Waxaan ku dadaalidoonaa hawo qaadashada.
Mabda 'ahaan, cunista iyo cabitaanka waa mamnuuc.
Waxaan si firfircoon u adeegsan doonnaa arjiga xaqiijinta xiriirka (COCOA) ee Wasaaradda Caafimaadka, Shaqada iyo Daryeelka.
Waxaan xoojin doonnaa cabirka heerkulka oo waxaan qaadi doonaa tallaabooyin sida sugitaanka guriga haddii aad qabtid qandho sare (*) marka la barbar dhigo qandhada caadiga ah ama haddii aad leedahay mid ka mid ah astaamaha soo socda.
Calaamadaha lagu garto sida qufac, dyspnea, guud ahaan xanuun, dhuun xanuun, sanka oo dareera / sanka oo isku xirma, dhadhanka / urinta, kalagoysyada / murqaha, shuban, matag, iwm.
Marka uu jiro xiriir dhow oo lala yeesho baaritaanka PCR-ga ee togan
Haddii ay jiraan xannibaadyo socdaal, taariikhda booqashooyinka waddammada / gobollada u baahan muddada indha indheynta ka dib gelitaanka, iyo xiriir dhow oo lala yeesho degganaha labadii toddobaad ee la soo dhaafay, iwm.
* Tusaalaha heerka "marka uu jiro kuleyl ka sareeya kan kuleylka caadiga ah" …… Marka uu jiro kuleyl ah 37.5 ° C ama ka sareeya ama XNUMX ° C ama ka sareeya kuleylka caadiga ah
XNUMX.Soo celinta lacagta taageerada markii waxqabadka dib loo dhigo ama la joojiyo
Haddii waxqabadka dib loo dhigo ama la joojiyo oo lacag celin la sameeyo, waxaan kuugu soo diri doonnaa habka soo celinta boostada ama emayl.Fadlan raac tilmaamaha oo ku buuxi nidaamka gudahood muddada soo-celinta celinta.Qadarka la celin karo waa kaliya qiimaha tigidhka iyo kharashka ku noqoshada tigidhka la soo saaray.Fadlan la soco in khidmadda iibsiga (rasiidka casriga ah, rasiidka dukaanka ku habboon, adeegga dirista) aan lagu dabaqi karin.